Mbappe ⇒ Real Madrid, Vinicius ⇒ PSG, Declan Rice ⇒ Man United, Haaland ⇒ Chelsea/City Iyo Wararkii U Dambeeyey Suuqa - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaMbappe ⇒ Real Madrid, Vinicius ⇒ PSG, Declan Rice ⇒ Man United, Haaland ⇒ Chelsea/City Iyo Wararkii U Dambeeyey Suuqa
Mbappe ⇒ Real Madrid, Vinicius ⇒ PSG, Declan Rice ⇒ Man United, Haaland ⇒ Chelsea/City Iyo Wararkii U Dambeeyey Suuqa
April 9, 2021 Abdiwahab Ahmed Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Wargeysyada ciyaaraha ayaa si joogto ah usoo bandhiga xogta, xanta iyo dhaqdhaqaaqa suuqa, waxaananu idiinka soo xulnay qodobbadii ugu waaweynaa ee ay qoreen maanta oo Jimce ah.
Manchester United ayaa West Haam United u bandhigi doonta suurtogalnimada ah in ay kala beddeshaan Declan Rice oo 22 jir ah iyo Jesse Lingard oo 28 jir ah. (Athletic)
Leeds United ayaa ku biirtay tartanka loogu jiro weeraryahanka Manchester City ee Sergio Aguero oo ah 32 jir uu qandaraaskiisu ku eg yahayd hamaadka xilli ciyaareedkna. (90min)
Weeraryahanka reer France ee Kyulian Mbappe ayuu laalmay mustaqbalkiisa PSG iyadoo uu 22 jirkani sii wado in uu ka adkaysto saxeexa qandaraas cusub. (Telegraph)
Mbappe wax heshiis cusub ah uma saxeexi doono PSG, sababtoo ah wuxuu doonayaa in uu ku biiro Real Madrid. (Cuatro)
Real Madrid ayaa diyaarinaysa in laacibka reer Brazil ee Vinicius Junior uu qayb ka noqdo heshiiska ay kula soo wareegayso Mbappe. (El Chiringuito)
Garabka 29 jirka ah ee Real Madrid ee Lucas Vazquqez oo uu qandaraaskiisu ku eg yahay dhamaadka xilli ciyaareedkan, ayaa go’aansaday in uu ka baxo Bernabeu iyadoo uu dalabyo ka helayo Manchester United iyo Chelsea. (Sun)
Weeraryahanka Manchester United iyo xulka qaranka Uruguay ee Edinson Cavani oo 34 jir ah, ayaa qarka u saaran in uu heshiis u saxeexo kooxda reer Argentina ee Boca Juniors.
Chelsea waxay xagaaga bartilmaameedsan doontaa weeraryahanka Borussia Dortmund iyo xulka Norway ee Erling Braut Haaland oo 20 jir ah, waxaase kula loollamaysa Manchester City. (90min)
Lyon ayaa £25 milyan oo Gini ku xidhay kooxaha doonaya difaaca Danish-ka ah ee Joachim Andersen oo ah 24 jir amaah kula jooga Fulham. Manchester United iyo Tottenham ayaa lala xidhiidhinayaa. (Metro)
Xiddiga reer Japan ee Takumi Minamino oo ah 26 jir ay Liverpool amaah ku siisay Southampton ayaa sheegay in uu la yaabay go’aankii ay kooxdiisu amaahda ugu dirtay bishii January. (Independent)
Liverpool ayaa calaamadsatay Teun Koopmeiners oo khadka dhexe uga ciyaara kooxda reer Netherlands ee AZ Alkmaar, waxaanay u doonayaan in ay ka dhigaan beddelka Georginio Winaldum oo ah 30 jir heshiiskiisu ku eg yahay xagaagan. (AS)
Khadka dhexe ee Chelsea iyo xulka Talyaaniga ee Jorginho oo 29 jir ah, ayaa sheegay in uu dib ugu laaban doono kooxdiisii hore ee Napoli ka hor inta aanu ciyaaraha ka fadhiisanin. (Sky Sports Italia)
Weeraryahanka reer France ee Ousmane Dembele oo 23 jir ah, ayaa heshiis cusub u saxeexaya Barcelona. (Marca)
Xiddiga reer Brazil ee Philippe Coutinho ayaa lagu daray sagaal ciyaartoy oo ay Barcelona iibinayso xagaagan. (Mirror).